Khilaafka Mursal iyo Khayre oo sii Xoogaysanaya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Khilaafka Mursal iyo Khayre oo sii Xoogaysanaya
Khilaafka Mursal iyo Khayre oo sii Xoogaysanaya
Khilaafka ka dhex taagan ra’iisul wasaare Kheyre iyo guddoomiyaha baarlamanka ayaa weli taagan, waxaana la isku mari la’yahay go’aanka uu Mursal ka qaadan lahaa kala diristii guddiga maaliyadda baarlamanka.
Guddigan oo uu kala diray guddoomiye ku-xigeenkiisa koowaad Cabdi Weli Muudey, kadib markii ay musuq maasuq ku eedeeyeen xukuumadda, ayaa sida la rumeysan yahay, Mursal wuxuu doonayaa in dib loo so celiyo, oo qaabkii lagu kala diray ay ahayd sharci darro.
Si kastaba, xukuumadda oo ay aad isugu dhow yihiin Mursal, markii horena ka dhigtay guddoomiye, ayaa kasoo horjeedda arrintan, ayada oo u aragta guul-darro siyaasadeed, si ay ilo-wareedyo sheegeen
Wada-hadallo socday dhowrkii malamood ee tagay ayaa la isku mari waayey, waxaana jira warar sheegaya in haddii guddiga sidan ku baxo, Mursal uu rumeysan yahay inay ku caddaan doonto tuhunka lag qabo ee ah inuu yahay nin xukuumadda ay maamusho oo aanay waxba ka go’in.
Si labada dhinacba ay u helaan waxa ay doonayaan, ayaa wararku waxay sheegayaa in ra’iisul wasaaraha ogolaaday in guddiga lasoo celiyo, balse dalbaday in is-beddel weyn lagu sameeyo.
Waxyaabaha Kheyre codsaday waxaa ka mid ah in xubnaha guddiga ee kasoo horjeeda xukuumadda lagu beddelo kuwa taageersan, islamaarkaana guddoomiyaha guddiga laga dhigo mid taageersan xukuumadda.
Guddiga ayaa ka kooban 18 xubnoo, oo 10 ka mid ah ay raacsan yihiin xukuumadda halka 8 ay yihiin mucaarad. Balse xubnaha mucaaradka ayaa ah kuwa haya xilalka ugu muhiimsan guddiga, islamarkaana leh saameynta ballaaran.
Lama yaqaan sida Mursal uu ka yeeli doono qorshahan cusub, oo la sheegay in hadda laga shaqeynayo qaabkii loo hir-gelin lahaa.
Previous articleWafdi uu hoggaaminaayo Guddoomiyaha Aqalka Sare oo Kismaayo Ku wajahan
Next articleFaa Faahin: Shabaab iyo Ciidanka dowladda oo ku dagaallamaya Gedo